अस्पतालको बेडमा अक्सिजन नपाएर छ'ट्पटाई रहेकी आमा लाई छोरीले आफ्नै मुखबाट दिइन् अक्सिजन (भिडियो सहित) -
Homeसमाचारअस्पतालको बेडमा अक्सिजन नपाएर छ’ट्पटाई रहेकी आमा लाई छोरीले आफ्नै मुखबाट दिइन् अक्सिजन (भिडियो सहित)
May 2, 2021 admin समाचार 368
पूरै भारत देश अक्सि’जनको कमीको साथ र्सघर्ष गर्दैछ। अक्सिजनको अभावमा मर्ने व्यक्तिको रिपोर्ट लगा’तार आउँदैछ। जब कोरोना संक्रमित महिलाले बह:राइचको अस्पतालमा अक्सिजन नपा’एपछि असहाय छोरीले उनको मुखबाट अ’क्सिजन दिने प्रयास गरिन्। यो भिडियो धेरै भाइरल भइरहेको छ।
त्यहाँ कोरोना बिरा’मीहरु अक्सिजनको कारण छट्पटिरहेको भिडियोहरु भाइरल भइरहेको दृश्य देखिन्छ । यस्तै एक दृश्य युपी’को बहराइचमा अक्सि’जनको कमी भएपछि भाइरल भएको छ। भारतको यूपीको बहराइचको अस्पता’लको भाइरल भिडियोमा बिरामी आमालाई छोरीको मुखबाट अक्सिजन दिइरहेको देखाइ’एको छ।
कोभिड १९ को दोस्रो च’रणमा भारतमा अक्सिजनको अभावले मृत्युको बीचमा बहरा’इचमा अक्सिजनको कमीका कारण बिरामीहरू कत्ति भाइरल हुन्छन् ? यो भाइरल भिडि’योमा स्पष्ट देखिन्छ।
आफ्नो आमा’लाई गाह्रो भएपछि सन्तान आफ्नो जीवन’को बलिदान दिन पनि पछि हट्दैनन् । यस्तै भयो युपीमा पनि । त्यहाँ एक छोरीले आफ्नो आमालाई अक्सिजन दिँदै आफ्नो जी’वन जोखिम मोलेकी छन् ।
उनले आमालाई अ’क्सिजन दिइरहेको भिडियो भाइरल भइरहेको छ । यस भाइरल भिडियोमा जिल्ला अस्प’तालको आपतकालिनको दृश्य देखाइ’एको छ जसमा एउटी छोरीले बिरामी आ’मालाई मुखबाट अक्सिजन दिईरहेकी छिन्। इताजा खबरबाट
April 7, 2021 admin समाचार 1118
March 3, 2021 admin समाचार 2910
February 16, 2021 admin समाचार 2112
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (172937)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (166794)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (166415)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (166234)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (165276)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (163894)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (163432)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (161905)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (156644)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145507)